Ny Fahasarotan’ny Fiatrehana Ny Fiovaovan’ny Toetrandro Ao Benin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2015 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, Ελληνικά, Italiano, English
Tsena Ouando, ao Porto-Novo, Benin tao amin'ny Babylas CC-BY-SA 30
Talohan'ny dinika momba ny fiovan'ny toetrandro nifarana vao haingana tao Paris fantatra amin'ny hoe COP 21, nisy ny kaonferansa isan-karazany momba ny olan'ny tontolo iainana nokarakaraina tao Benin. Tamin'ny 2 Desambra, nihaona tao Cotonou, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena ireo manam-pahaizana mba hiresaka momba ny fampandrosoana manoloana ny fiovan'ny toetrandro, hetsika nokarakarain'ny Sampan-draharaha Frantsay ho an'ny Fampandrosoana.
Andro vitsivitsy tany aloha, tao amin'izany tanàna izany, nanatevin-daharana ny diaben'ny Beninoà momba ny toetrandro (Marche béninoise pour le Climat) ny vahoaka tamin'ny 29 Novambra, hetsika nokarakarain'ny vondrona mpanandra-peo amin'ny resaka tontolo iainana sy ny fikambanana sivika manerantany Avaaz ary ny Kaonsilin'i Belzika ao Bénin.
Hita hatrany ao amin'ny firenena Afrikanina miorina ao amin'ny helodranon'i Guinée ny olana ara-tontolo iainana, sokajin'ny fenitra COP 21 ho firenena tsy mpandoto, hoy i Raphaël Edou, minisitry ny fiovan'ny toetrandro teo aloha ao Benin ary mpanolo-tsaina manokana momba ny tontolo iainana ankehitriny, ary nandray anjara tamin'ny fihaonambe tao Cotonou. Raha mamoaka taha ambany manontolon'ny CO2 nandritra ny folo taona lasa i Benin, niakatra ny tahan'ny famoahany etona tao anatin'ny taona vitsivitsy, araka ny filazan'ny Tondrom-pampandrosoana Manerantany, ary miaina ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ny firenena.
Saingy mora lazaina kokoa fa sarotra tanterahina matetika ny fiatrehana ny fiovan'ny tontolo iainana sy ny fanaovana ezaka hisorohana fiovana maro hafa bebe kokoa.
“Mety hitondra tombontsoa ho an'ny fampandrosoana ve ny fiovaovan'ny toetrandro”
Ny lohahevitry ny fihaonambe tao Cotonou, notontosaina tao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Frantsay dia: “Mampiseho tombontsoa tokoa ho an'ny fampandrosoana ve ny fiovaovan'ny toetrandro? Ary ho amin'ny tombontsoan'iza?”
Nifantoka manodidina ny fahafahan'ny zanak'olombelona miatrika ny zavamisy vaovao amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny maka tombontsoa amin’ izany ny resaka. Tao Bénin, izany fiatrehana izany – izay antsoin'ny hafa koa hoe fanerena – dia hita amin'ny ezaka ataon'ireo Beninoà sasany miezaka mampamokatra tany avy amin'ny tany potiky ny fampiasana fanafody famonoana bibikely. Tsy mahavita tena ara-tsakafo misy ao an-toerana i Benin, araka ny asehoan'ny tahiry nangonin'ny FAO. Aleon'ny mpamboly mampiasa fanafody famonoana bibikely bebe kokoa mba hahabetsaka indrindra ny vokatr'izy ireo, na dia eo aza ireo olana misy eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fahasalamam-bahoaka. Mitranga izany fampiasana faobe ny fanafody famonoana bibikely izany na dia teo aza ny fanentanan'ny fikambanana tsy miankina misahana ny fambolena sy ny tontolo iainana mikasika ny loza mety ateraky ny fampiasana izany.
Fihaonambe momba ny fiovaovan'ny toetrandro tao Cotonou, Benin. Sary avy amin'i Chiara Ronca. Nahazoan-dalana.
Nandritra ny fihaonambe, nilaza i Raphaël Edou fa iray amin'ireo olana lehibe indrindra ao Benin ny fampiharana ny tetikasa sy ny paikady ara-tontolo iainana. Na izany aza, tsy nohazavainy izay fandraisana anjaran'ny mpiantsehatra ara-politika sy ny andrim-panjakana isan-karazany amin'ny famolavolana izany paikady izany, ary iza no tokony hitarika: ny governemanta, ny sehatra tsy miankina, na ny fiarahamonim-pirenena.
Inona no azonao atao hahatonga ny Beninoà hitodika amin'ny fandotoana ataon'izy ireo tsirairay avy raha miezaka miala amin'ny fahantrana ny laharam-pahamehana voalohan'izy ireo? Izany no fanontaniana napetraky ny solontenan'ny Unicef ao Bénin, Anne Vincent.
Iray amin'ireo firenena mahantra indrindra manerantany i Benin: tamin'ny 2013, nalahatry ny Firenena Mikambana ho faha 165 tamin'ny 187 tamin'ny Laharam-Pampandrosoana maha Olombelona i Benin. Mampiseho izany fa sarotra tanteraka ny manosika fiovana eo amin'ny fitondran-tenan'ny olona. Ohatra iray amin'ireo fikambanana manosika amin'ny fanentanana ny olona sy ny fiarovana ho an'ny tontolo iainana ny fikambanana tsy miankina Mpanohana ny tontolo iainana.
Ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ao Benin
Miatrika fanamby maromaro amin'ny toetrandro i Benin, izay miorina eo anelanelan'ny Ranomasimbe Atlantika hatrao amin'ny valan-javaboary Pendjari ao amin'ny sisintany iraisana amin'i Burkina Faso ao avaratra. Nampitombo ny fitambaran'ny orana isan-taona ny rivo-doza mahery vaika miha-matetika. Manafotra ny lalana ao amin'ny ankamaroan'ny faritra an-tanàndehibe ny orana mikija mandritra ny ora maro. Miha-ratsy kokoa izany any ambanivohitra: mandritra ny fotoanan'ny orana, nihena ny famokarana ara-pambolena- matetika manimba ny voly ny orana mivatravatra – raha tapaka kosa ny lalam-pifandraisana ary sahirana ny olona mandeha any an-tsena mba hivarotra ny vokatra.
Fako ao Benin. Sary avy amin'i Chiara Ronca. Nahazoan-dalana.
Ankilan'ny toetrandro mihoapampana, nitatitra ireo manam-pahaizana maro – tahaka an'i Yves Du Penhoat, mpikaroka ao amin'ny Ivon-toeram-pikarohana Frantsay ho an'ny Fampandrosoana, izay nandray anjara tamin'ny Fihaonam-be tao Cotonou fa nitombo hatrany ny haavon'ny ranomasina tao anatin'izay taona vitsy izay. Ho an'ny firenena izay miorina akaikin'ny farihy na manamorona ny ranomasina ny tanàna manan-danja indrindra, Porto Novo sy Cotonou, tsy azo tsinontsinoavina ny mety hisian'ny loza.
Ankoatra izany, miavosa ny fako ao amin'ny firenena. Raha mieritreritra ianao fa efa zatra izany, tsy afaka manao na inona na inona ny masonao saingy gaga amin'ny fahabetsahan'ny harona plastika hatraiza hatraiza, na dia eny amoron-dranomasina mahafinaritra indrindra aza, ary indrindra indrindra ao amin'ny toerana mahatalanjona Route de Pêche (Lalan'ny Fanjonoana).
“Mieritreritra ankapobeny, miasa ao an-toerana”
Nandefa solontena 100 handray anjara amin'ny COP 21 ao Paris i Benin. “Mieritreritra ankapobeny , miasa ao an-toerana” ny hafatra lehibe avy amin'izy ireo. Nilaza izy ireo fa tsy afaka miasa manokana ao an-toerana ny fiarahamonim-pirenena raha tsy misy ny fandraisana anjaran'ny mpisehatra rehetra ao amin'ny firenena, indrindra ny andrim-panjakana ara-politika.
Raha mihatsara ny fari-piainan'ny olona, mety ho mora kokoa ny miatrika ny olan'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana atsy ho atsy. Dingana tena lava izany izay mitaky fanaovan-javatra mihoatra kely noho ny fikasana tsara sy teny filamatra.– fahavononana ara-politika mandritra ny fotoana maharitra no ilaina.